‘तिमीहरु मेरा लागी मर्यौ’ भन्दै जन्मदिएका बुवा-आमालेनै छोराछोरीलाई छोडेपछि..(भिडियो हेर्नुस्)
September 11, 2020 1025
काठमाडौ । केही दिन देखि एउटा भिडि’यो भाइरल भइर’हेको छ । भक्तपुरमा आ’माबुवा भएर पनि टुहुरा बनेका चार बालबालिकाहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केही महिना देखि भक्तपुरको एउटा कोठामा लकडा’उनका समयमा भोकै बसेका चार बालबा’लिकाले धेरै महिना पछि आफ्नो आमा’लाई फेला पारेका छन् ।
संगै हुँदा पनि कहिल्यै आमा’बुवाको माया न’पाएका उनीहरुले आमालाई अर्कै पुरुषसंग देख्दा उनीहरु’लाई अचम्म लाग्यो । आमा त्यहाँ छन् भन्ने थाहा पाएर भेट्न जाँदा आ’माले माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर भेट हुँदा पनि आमाले ‘माया गर्दिन भनेको सुने’पछि छोराछोरी निकै दुखी भएका छन् ।
४ छोराछोरीलाई छो’डेर आमा र बुवा अर्कै टि’पेर हिडेपछि यि बालबालि’काको बिचल्ली भएको थियो । भिडियोमा यिनीहरुको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक भए’पछि सहयोग आउन थाले’को छ । अहिले उनीहरुको कोठामा आधारभुत बस्तुहरुका जम्मा हुन थालेको छ ।
यस्तै बेलामा उनीहरुले आ’मालाई पनि देखे । तर पनि आमा’ले माया गर्दिन भनेर तिरस्कार गरे’पछि बालबालिका थप दुखि भएका छन् । सबैभन्दा दुखी माइली छोरी भएकी छन् । उनी आमा’लाई भेटेदेखि नै आँखा ओभाएका छैनन् ।
तीन छोरी र एक छोरा’लाई छोडेर गएका अभिभा’वकहरुलाई जेठो छोरीले भावुक सन्देश दिएकी छन् । जेठी छोरी उर्मीलाले उनले भनेकी छन्, बाबा र ममीका कारण हा’मीले यति धेरै दु’ख पार्यौ यो संसारमा भएका बाबा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई यसरी अल’पत्र पारेर नछोड्नुहोला ।
माइली छोरी मुना”को आमाले नाम समे’त लिइनन् । त्यो सम्झेर अहिले पनि उनी दुखी छन् । आँखा ओभाएका छैनन् । आमाबुवा संगै हुँदा पनि बुवाले मुनाला’ई माया गर्ने भए’काले बाबाको प्यारी छो’री भन्दै संधै हे ला गर्ने गरेको जेठी छोरीले बताएकी छन् ।
Prevकोरोनाबाट नेपालमा आज ५ जनाको मृ’त्यु , यी-यी जिल्लाका हुन् मृतक….
Nextयस्तो लफ’डा परेपछि प्रह’री चौकी पुगीन् युट्युवर सोनिका रोकाया….
अग्रिम विद्युत महसुल तिर्दा यती धेरै छुट पाइने
आज एकैदिनमा ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
नाटक गरेको भन्नेहरुलाई अर्जुनले दिए यस्तो कडा जवाफ ( भिडियो हेर्नुहोस )